MAANHADAL: Su’aashii Xildhibaan Cawil Daad ee uu waydiiyay madaxweyne Deni ma ahayd mid dacwad ciqaabeed lagu mutaysan karo? ( dhegayso | daawo ) – Radio Daljir
MAANHADAL: Su’aashii Xildhibaan Cawil Daad ee uu waydiiyay madaxweyne Deni ma ahayd mid dacwad ciqaabeed lagu mutaysan karo? ( dhegayso | daawo )
Nofeembar 1, 2019 11:19 b 0
barnaamijka Maanhadal Todobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa Xeerilaalinta Puntland ayaa dacwad ciqaabeed ku soo oogtay Xildhibaan Cawil Daad oo kalfadhigii 45aad ee baarlamaanka Puntland su’aal guux badan dhalisay kuwaydiiyay madaxweynaha Puntland.
Hadaba Su’aasha Xildhibaanku waydiiyey Madaxweyne Deni ma ahayd mid dacwad ciqaabeed lagu mutaysan karo kuna waayi karo xasaanadiisa, maxayse ka dhigan tahay in Xeer ilaalintu dacwad ka keento xildhibaan su’aal waydiiyey madaxweynaha?
Waa mowduuca barnaamijka Maanhadal ee maanta,waxaan soo jeedinaya wariye Maxamuud Cabdi Ibraahin oo Bosaaso kusugan.